DEG DEG VIDEO;- Ciidamadii Ugu Badna ee Somaliland oo ku Wajahan Xarunta Puntland MUUQAAL | Xogtashacabka24.com
Published on January 11, 2018 by admin · No Comments
Ciidamadii ugu badna ee Somaliland ayaa kasoo dhaqaaqay Magaalada Hargeysa oo xarun ah Somaliland iyago ku wajahan degaanka Tukaraq ee Gobalka oo dhawaan kala waregen Puntland halkaas oo la filayo iney tagan masuuliyiin ka tirsan Somaliland.
Warbaahinta ayaa heshay muuqaal muujinaya bixitaanka ciidamada ugu soo baxen Magaalada Hargeyso iyado saraakiil ka tirsan laamaha amaanka Somaliland ay shegen in ciidamada ay tagi donaan degaano ka tirsan Xadka Puntland iyo Somaliland.
Ciidamada oo ku gaashaman gaadiidka degaalka ayaa la arkayey iyago kasoo baxay Hargeysa isla markaana shacabka badan ay u taagnayen hareraha wada waxana arintan ay timid xili dhawaan Maamulka Puntland uu ku hanjabay degaal ka dhan ah Somaliland.
Dhawaan ayey aheyd markii degaanka Tukaraq u ka dhacay degaal xoogan oo u dhaxeya Somaliland iyo Puntland halkaas oo ay ugu danbeyn la waregen ciidamada Somaliland waxana xiligaasi waxii ka danbeyay laga daremayey labada dhinac xiisad colaaded.
HALKAN KADAAWO MUUAALKA